Xiaomi nwere ike ịmalite MIUI 9 na mbido July | Gam akporosis
Xiaomi nwere ike ịmalite MIUI 9 na mbido July
Xiaomi, otu n'ime ndị na-emepụta gam akporo smartphones na ụwa ma na-akpọkarị "apụl ndị China", na-akwadebe mwepụta nke sistemụ arụmọrụ ya ọzọ, MIUI 9, n'ezie akwa nke nhazi na gam akporo nke na-enye aka pụrụ iche Mi usoro smartphones na mbadamba.
Ọfọn, ọ dị ka ọbịbịa nke MIUI 9 nwere ike ịmalite dị ka mmalite nke July na-esote, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na nke ahụ bụ ihe nrụọrụ weebụ a mụrụ na China MyDrivers na-ekwu na akụkọ ọhụrụ edepụtara n'oge na-adịbeghị anya.
MIUI 9 ga-abata n'ime otu ọnwa
Ngụgụ ahụ yiri ka ọ bidola ma naanị n’ime otu ọnwa Xiaomi nwere ike ịmalite ụdị nke iteghete nke usoro nhazi nke metụtara ngwaọrụ mkpanaka ya, MIUI 9. Dịka mbipụta nke MyDrivers mere, ọ ga-abụ na mbido ọnwa Julaị mgbe Nnukwu ndị China malitere inyefe mmelite a.
Versiondị nke gara aga na n'oge ahụ dị na smartphones nke ika ahụ, MIUI 8, ka emere na ọnwa nke Ọgọstụ nke afọ gara aga yabụ, ọ bụrụ gwa yae ziri ezi, ọ pụtara na mwepụta nke MIUI 9 ga-atụ anya na otu ọnwa dị ka nke hypothetically buru ụzọ hụ ụzọ. O sina dị, O nwekwara ike ịbụ na Xiaomi kpebiri ịmalite ụdị MIUI 9 na July na July, yana mmalite nke MIUI 9 anaghị eme ruo August, si otú a mee ka ọ daba na mmalite nke afọ gara aga.
Banyere ozi ọma a na-atụ anya MIUI 9 weta, asịrị ndị ama ama ruo ugbu a na-egosi ewebata a ikesa ihuenyo mode nke ekwere na mbu na ọ ga-abata na MIUI 8, yana ọnọdụ ahụ foto dị na foto (PIP) nke ekwesiri itinye Google na gam akporo O mgbe emeputara ya na eze n’aho a.
Ma n'ụzọ ezi uche dị na ya, a na-atụ anya atụmatụ ndị ọzọ ọzọ yana mmelite arụmọrụ na ndozi ahụhụ. N'oge a amaghi ngwaọrụ nke dakọtara na MIUI 9, n'agbanyeghị ọhụrụ Mi6 ga-abụ otu n’ime ndị mbụ ga-enweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi nwere ike ịmalite MIUI 9 na mbido July
Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka gam akporo